Talaalka Covid-19 - WalWaal Online News and Information about Somalia
Home Wararka Talaalka Covid-19
Muqdisho (Walwaal.com) Tuhunkii ahaa in uu farsameeyey markii hore Maraykanku cudurka Covid-19 ayaa u muuqda mid dhaboobey ka dib markii la sheegay in talaalkiisa laga helay Maraykanka ayna ku socoto tijaabintii u horaysay.
Tijaabooyinka u horeeya ayaa la doonayaa in lagu tijaaabiyo dad qaba cudurka Covid-19, oo farah aka baxay kuna haya aduunka dhibaato caafimaad iyo mid dhaqaale xilli uu cudurkani maansheeyey in ka baddan 150 dal aduunka oo dhan.
Tijaabo ayaa tallaalkaan ku socota. 6 todobaad kadib, ayaa la filayaa inuu si rasmi ah u dhaqan galo. Waxaa markii ugu horeysay lagu tijaabiyay bukaan qaba cudurka Coranavirus.
Sida la sheegay cudurku wuxuu markiiba ka takhalusi karaa dadka da’da weyn ee dhaafsiisan 80 sano, Waxayse culumada diyaarisay talaalkani sheegeen in marka hore lagu tijaabin doono talaalka dadka da’doodu tahay 18-55 jir. Tallaalka, oo loo bixiyey mRNA-1273, ayaa la rajaynayaa inuu firfircooni geliyo habdhiska difaaca jidhka biniaadmiga, sida uu sheegay. Anthony S. Fauci, oo ah agaasime macad caafimaad.
wadamada uu sida aadka ah u weerarsanyahay cudurkani waxaa safka hore ku jira Talyaaniga & Iran, oo madaxwynaha iran wuxuu aduunka waydiistey kaalmo iyo gacan in laga siiyo sidii ay cudurka isaga difaaci lahaayeen. Wuxuu na sheegay Xasan Rooxaani in Viruska Coranavirus ee iiraan halakaynayaa uu si aad ah uga duwan yahay kii shiinaha.
baddi madaxda caalamku waxay ku dhawaaqeen xaalado degdeg ah oo lagu soo rogo waddamadooda, waxaan a la hakiyey dhamaan isusocodka aduunka, dhaqaaluhu na wuxuu hoos u dhac u sameeyey si wayn, ilaa isniintii shalay suuqa sarifka world street uu lumiyey 5-9 dhibcood markii la furayba, ayna khasab noqotay in la xidho.
dhanka kale, Ururka Caafimaadka Adduunku (WHO) wuxuu sheegay in dadka qaaday cudurku ay gaadhayaan 175,000 dhimashadiisuna ay tiigsatey ilaa 6,500. Ilaah ha inaga badbaadiyee Walwaal.com waxay dadka soomaaliyeed ugu baaqaysaa inay siweyn u taxadaraan.
Previous articleBARASHADA BURJIYADA
Next articleMiyuu soo hannuunay Faysal Cali Waraabe?